Humidifier, mpanadio rivotra, Kettle elektrika - Kennedy
Nandritra ny 20 taona mahery ny fampandrosoana, KENNEDE dia manana tombony amin'ny fifaninanana.
KENNEDE dia manana tombony ara-teknika matanjaka ary patanty maherin'ny 860, anisan'izany ny patanty maherin'ny 100 voasoratra any amin'ny firenena vahiny.
Ny kalitao no fototry ny fahaveloman'ny orinasa sy ny fampandrosoana, marika fitantanana kalitao: fahafaham-po amin'ny mpanjifa avo lenta, tahan'ny vidiny ambany. Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hamolavola andiana fepetra fanatsarana mifototra amin'ireo tanjona roa ireo, hanatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaiza-manao ara-teknika ho an'ny mpiasa rehetra, hanome fanohanana matanjaka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny orinasa, ary hamorona ho avy mandresy.
Ny orinasanay dia nitombo ho Premier ISO 9001and BSCI Certified mpanamboatra ny kalitao avo, Cost-Effective.
Kennede dia hita ao amin'ny JIangmen City, faritanin'i Guangdong, mandrakotra faritra 220000 metatra toradroa, . Naorina tamin'ny taona 2000 izahay, orinasa matihanina ho an'ny entana Rechargeable sy entana an-trano. OEM sy ODM dia tonga soa.
Raha mila vahaolana ara-indostrialy ianao... Misy ho anao izahay
Manome vahaolana vaovao ho an'ny fandrosoana maharitra izahay. Ny ekipanay matihanina dia miasa hampitombo ny vokatra sy ny fahombiazan'ny vidiny eny an-tsena